စွပ်စွဲချက် Xiaomi Mi MIX4ကိုတရုတ်အေဂျင်စီ 3C | ကအသိအမှတ်ပြုထားသည် Androidsis
Xiaomi ၏ Mi MIX4သည်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိပြီး 3G ဖြင့် 5C အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်
Xiaomi သည် 5G မိုဘိုင်းကိုဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရန်အတွက်နောက်ထပ်စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာသည်အခြားမည်သည့်ကြောင့်မျှော်လင့်မထားဘူးဆိုရင်။ ၎င်းဆက်သွယ်မှုသည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ 3C အေဂျင်စီ၏ဒေတာဘေ့စ်တွင်ဆက်သွယ်မှုရှိသော terminal ကိုမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းဖြစ်သဖြင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း၎င်းကိုကုမ္ပဏီအားတရားဝင်ပြသရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
China Certified မဖြစ်မနေအမှတ်အသား (CCC or 3C, အများအားဖြင့်လူသိများပြီးကောင်းစွာသိထားသည့်အတိုင်း) သည်မကြာမီစက်တစ်လုံးကိုမကြာမီဖြန့်ချိတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဤတံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်သဘောတူလက်ခံသူမည်သူမဆိုသည်၎င်း၏တရားဝင်ရုံးခွဲနှင့်နီးသည်။ Xiaomi နှင့်နောက်ထပ် 5G စမတ်ဖုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မူ mi MIX4-ဘာလဲ ဆောင်း ဦး ရာသီရောက်နိုင်- လက်မှတ်သည်အေဂျင်စီလက်ဖြင့်ဖြတ်သန်းသွားပုံရသည်။
မကြာသေးမီကပေါက်ကြားခဲ့သော M1908F1XE ၏ 3CC တွင်ပေါက်ကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည် 5G ဆက်သွယ်မှုရှိသောမိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖုန်းနှင့်အတူအတည်ပြုထားသော MDY-10-EX အားသွင်းစက်သည် Xiaomi Mi 45 နှင့်အခြားဆိပ်ကမ်းများကဲ့သို့ ၄၅ ဝပ်အထိဝန်ဆောင်နိုင်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုသည်မှာဤစမတ်ဖုန်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသော Xiaomi Mi Mix4ဖြစ်သည်ကိုအခိုင်အမာအတည်ပြုသောအချက်အလက်အချို့ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးတစ်ခုရပြီးဒီမိုဘိုင်းနဲ့ဆက်စပ်မှုသည်မှန်ကန်သည်.
Xiaomi Mi MIX4တွင်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါ ၀ င်သည်
ဒါဟာသူကပြောပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် တရုတ်ထုတ်လုပ်သူသည် Mi MIX4ကို Mi MIX5အဖြစ်စတင်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွင်နံပါတ် ၄ နှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်အရာအားလုံးမှာအနောက်နိုင်ငံများတွင် ၁၃ ခုရှိသကဲ့သို့နည်းတူညံ့ဖျင်းသောနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ စမတ်ဖုန်းသည်ကိန်းဂဏန်းလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်နာနိုင်မှုသည်အတော်အတန်မြင့်မားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi ၏ Mi MIX4သည်ပိုမိုနီးကပ်စွာရှိပြီး 3G ဖြင့် 5C အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်
UMIDIGI X: အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းအသစ်သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်
Huawei ၏ပထမဆုံးဖုန်းကိုယခုနှစ်တွင် Android မရှိဘဲရောင်းချမည်